ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com ပန်းနု (စ+ဆုံး)
ကျွန်မနာမည်ပန်းနုပါ။ ရန်ကုန်မှာ..ကွန်ပြူတာသင်တန်းလာတတ်တာပါ။ ဇာတိကနယ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာပေါ့။ ရန်ကုန်မှာကတော့..မီးရဲ့.ဦးလေးတော်တဲ့ ဦးမောင်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့.သင်တန်းတက် ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်စကတော့……ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့ရှင်.အသက်က..18ပြည့်ပြီးလို့မှ..3လလောက်ပဲ ရှိသေးတာလေ..ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တော့.စာရင်းကိုင်နဲ့.ကွန်ပြူတာသင်တန်းလာတတ်တာပေါ့ရှင်။
ဦးမောင်အ်ိမ်မှာနေရတာက..နေရေး၊စားေ၇း.အစစအရာရာအဆင်ပြေပါတယ်..အဖေကလည်း ..ဦးမောင်ဆီမှာသေချာအပ်သွားတာလေ.. ဦးမောင်တို့လင်မယားကလည်း.မီးကို.ဂရုစိုက်ပါတယ်. အိမ်မှာက.ဦးမောင်ရယ်.ဦးမောင်ဇနီး…..သူ့သား..မောင်လေး ဇော်ဇော်ရယ်ပဲရှိပါတယ်.. မောင်လေးက.ခုမှ 8တန်းပဲရှိပါသေးတယ.်..မီးက.သူ့ကို.ညညဆို.စာသင်ပြရတာပေါ့..ဦးမောင်တို့က..တစ်ခန်းအိပ်ပါတယ်။ မီးကတစ်ခန်း..မောင်လေးဇော်က.တစ်ခန်းပေါ့။
တစ်ညပေါ့.ရှင်..မီးညဖက်..အပေါ့အပါးသွားချင်တာနဲ့.အိမ်နောက်ဖေးဖက်ကို ထွက်အလာမှာပေါ့… ..ဦးမောင်တို့.အခန်းကနေ..အသံတွေကြားနေရတယ်။..မီးလည်း.အပျိုလေးပဲလေ. .ဘာအသံ
လဲဆိုတာ သိတာပေါ့….တစ်ခါမှလည်းမကြုံဖူးလို့……တံခါးလေးကလည်းစေ့ထားရုံပဲဆိုတော့..အသာလေး .ချောင်းကြည့်မိတာပေါ့. ….အားပါးပါး..ရင်ခုန်စရာကောင်းလိုက်တာရှင်…..
ဦးမောင်အရမ်းကောင်းနေတယ်ထင်တယ်. တအားအားနဲ့. ပြီးတော့..
.ဦးမောင်ဟာကြီးက. အကြီးကြီးပဲရှင်..မိးတော့.ဒီလောက်ကြီးတာမျိုး.တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူး..ယောကျာ်းတွေရဲ့ဟာကို..တွေ့ရတာ ဒါပထမဆုံးပါပဲ..မီးကြည့်နေတုန်းမှာပဲ.ဦးမောင်နဲ့..
အန်တီနဲ့က တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်လိုက်ကြတယ်လေ..အ၀တ်အစားဆိုလို့.တစ်စုံတစ်ခုမှမရှိပါဘူး .နှစ်ယောက်လုံး.ကိုယ်လုံးတီးချည်းပဲ..
သူတို့..69 ပုံစံနေနေကြတာ.ဦးမောင်က..အန်တီဲ့ရဲ့ စဖုတ်မဲမဲကြီးကို..လျှာနဲ့..
´ ပလပ်´ ခနဲ့.လျက်လိုက်တာ.အန်တီတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိပါဘူးရှင်.
မီးကတော့ မီးစဖုတ်လေးးမှာ အရည်တွေရွဲလို့ပေါ့.. ညီမလေးကိုအသာအုပ်ကိုင်ပြီး.ညအိပ်ထမီ..ပါးပါးလေးအပြင်ကနေ.အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ပွတ်ပေးနေမိတယ်.။။။။။။။။။။။
ခဏလောက်အကြာမှာတော့ သူတို့ပုံစံပြောင်းလိုက်ကြတယ် အန်တီလေးက လေးဖက်ထောက်ပီး ကုန်းပေးထားတယ်။ ဦးမောင်က တီလေး၏ နောက်တွင် နေရာတကျယူကာ သူ၏ထွားကြိုင်းတုတ်ခိုင်လှသော လိင်တံကြီးကို အဖုတ်လေးနှင့် ဖင်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ဆွဆွပွတ်ထိုးနေသည်။ မီးမီးခမျာတော့ သူတို့ကိုကြည့်ရင်း ရင်တဖိုဖို အသဲတယားယားနဲ့ပေါ့ရှင် ဦးမောင်၏ထွားကြိုင်းလှသော လိင်တံကိုကြည့်ရင် ရင်ဖိုနေမိတယ် အန်တီလေး နေရာမှာ မီးကိုယ်တိုင် အဲလိုလေး ကုန်းပေးချင်နေမိတယ်။ မီးရဲ့ ပိပိလေးကိုလဲ ဦးမောင်ဟာကြီးနဲ့ ပွတ်တာကို ခံချင်နေမိတယ်ပေါ့ရှင် ။
`အား´ တော်ပြီကွာမောင် ရယ် လုပ်တော့လေ ဒီမှာ အထဲမှာ ယားကျိကျိနဲ့မရတော့ဘူး အန်တီလေး၏ ခံချင်လွန်းသော အသံလေးသည် မီးမီးကိုလည်း ရင်ဖိုစေသည်။ မီးကြည့်နေစဉ်မှာပင် ဦးမောင်၏ လိင်တံတုတ်တုတ်ကြီးသည် တီလေး၏ စဖုတ်အတွင်းသို့ အဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားလေတော့သည်။
`စွတ်´ ပြွတ် ပြွတ် ဦးမောင်သည် ဖင်သားများကိုကိုင်ကာ အားရပါးရဆောင့်ထည့်နေသည် ဒုတ်ဒုတ် ဗြွတ် အား အား ကောင်းတယ်မောင် အရမ်းကောင်းတာပဲ ဆောင့်ဆောင့် အားရပါးရသာဆောင့်စမ်းပါ အုံပွင့်ရင်ပွင့်သွားပါစေ အဆုံးထိသာဆောင့်ပစ်လိုက်စမ်းပါ မောင်ရယ် တီလေးမှာ အရမ်းကို ကောင်းနေပြီထင်၏ ဦးမောင်၏ ဆောင့်ချက်များနှင့် အညီ ဖင်သားများကို နောက်သို့ကော့ကော့ပေးနေသည်။
အား .. ကောင်းလိုက်တာကွာ မိန်းမရာ မင်းဖင်သားကြီးတွေက အရမ်းလိုးချင်စရာကြီးကွာ ဦးမောင်သည် တီလေး၏နို့အုံလေးများကို နောက်မှ အုပ်ကိုင်ကာ နောက်မှ တဖုန်းဖုန်းနှင့် ဆောင့်ထည့်နေသည်။ အား . အား မောင် လိုး.. လိုးစမ်းပါ တီလေး၏ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းစကားများသည် ဦးမောင်ကို ပိုပြီး စိတ်ကြွစေသည် ထင်၏ ဦးမောင်၏ ဆောင့်ချက်များမှာ ပိုပြီးမြန်ဆန်လာသည်။
`စွတ် ၊ ဒုတ် ဒုတ်။ အား ဖွတ် ၊ ဘွတ် အားပါးပါး ကောင်းလိုက်တာ ဖင်ကို ကွဲတဲ့အထိဆောင့်ပေးပါ မောင်ရယ် အား အား ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ်မောင် ဆောင့်ဆောင့် မောင်လည်းပြီးတော့မယ် ကောင်းလိုက်တာကွ
သူ၏သုတ်ပူပူနွေးနွေးများကို တီလေး၏အဖုတ်အတွင်းသို့ ပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည်။
…..သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ပြီးသွားသော်လည်း. မီးမှာ ဦးမောင်တို့ လိုးကြဆော်ကြပုံကိုမြင်ယောင်ရင်းအိပ်မပျော် နိုင် အိပ်ခန်းလေးသို့ပြန်သွားရင်း ကုတင်ပေါ်တွင် လူးလွန့်နေမိသည် ဦးမောင်၏အတံကြီးမှာ ထွားကြိုင်းလွန်းလှသည် အဲဒါကြီးနဲ့လုပ်တာကို ခံလိုက်ရရင်
ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး မကောင်းပါဘူးလေ. သူက ငါ့ဦးလေးအရင်းကြီးကို မသင့်တော်ပါဘူး ဟု မီးစိတ်ကိုမီးပြန်ဖြေလိုက်သည်။ လူကသာ လက်ခံသော်လည်း ညီမလေးကလက်မခံ လီးကြီးကြီးနဲ့လိုးတာကို ခံချင်နေမိသည် မထူးတော့သည့်အဆုံး လက်ခလယ်လေးကို အရည်ရွှဲရွှဲစိုနေသော ညီမလေး အတွင်း သို့ ထိုးမွှေမိတော့သည် အား.. အား..အား ကောင်းလိုက်တာ လိုးလိုး..ဦးမောင်. မီးမီးကို လိုး မညှာနဲ့နော် ဦးမောင်၏လိင်တံတုတ်တုတ်ကို. မှန်းကာ အာသာဖြေနေမိသည် ခဏအကြာ စောက်ရည်နွေးနွေးလေးများ. ထွက်လာကာ တကိုယ်လုံးကော့ပျံနေမိတော့သည်။ မောမောနှင့် မီးမီးအိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ သင်တန်းမှအပြန် ညနေပိုင်းအချိန်တွင် ထမိန်ရင်လျားလေးနှင့်ရေချိုးနေသော မီးမီးးကို စပါးကြီးမြွှေမျက်လုံးများကဲ့သို့ စူးရဲ၇ဲမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသော ဖေဖေ့ကို ဇော်ဇော်တွေ့လိုက်ရသည်။ ဖေဖေကြည့်မည်ဆိုလည်းကြည့်ချင်စရာပင် မမပန်းနုမှာ အရွယ်နှင့်ပင်မလိုက်အောင် ဖွံ့ထွားလွန်းလှသည်။ ဖင်သားလေးများမှာစွင့်ကားနေပြီး ရေစိုနေသောကြောင့် ဖင်အမြောင်းလေးများပင်ပေါ်လွင်နေသည်။ ရွှေဝါရောင် ၀င်းမွတ်နေသော ရင်သားများမှာ အညှာလေးပင်ပေါ်နေသည်။ မို့ဖောင်းနုထွားလှလေသည်။ ဇော်ဇော်မှာ ကလေးမဟုတ်တော့ လူပျိုသာသာဖြစ်နေပေပြီ။ ဂွင်းထုတတ်နေပီ။ တစ်ခါတစ်ရံ မမပန်းနု အ၀တ်လဲနေသည်များကို ခိုးချောင်းပြီးဂွင်းထုရသည်မှာအမော…………။
တစ်ည ဇော်ဇော်အိပ်မပျော်သဖြင့် ၀ရံတာတွင်ထွက်ပြီးထိုင်နေမိသည် ။ အချိန်က 1နာရီခန့်ရှိပေမည်။ ထိုစဉ် မမပန်းနုအခန်းမှ တအင်းအင်းနှင့် ညည်းသံသဲ့ သဲ့ကိုကြားရသည် ဇော်ဇော်စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ပြတင်းပေါက်တံခါးကို အသာလှပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ မမပန်းနုသည် အခန်းရှိ video player ထဲမှ အပြာကားများကိုကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။
ဇာတ်ကားများကား ဇော်ဇော့် အခန်းထဲတွင်သိမ်းထားသော ကားများ မမဘယ်လိုတွေ့သွားမှန်းမသိချေ။ တွေ့သွားတာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းမဟုတ်လား ။
မမပန်းနုသည် ဇာတ်ကားများ ကြည့်ပြီး ဖီလ်းတော်တော်လာနေဟန်တူသည် ည၀တ်ထမိန်ပါးပါးလေးကို အသာလှန်ပြီး တီဗီရှေ့တွင် ပေါင်လေးကားက စဖုတ်လေးကို လက်ညှိုးလေးနှင့် ပွတ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ ဇော်ဇော့်အာခေါင်များပင်ခြောက်သွေ့လာသည်။ မမအာသာဖြေနေသည်ကိုတွေ့ပြီး မိမိလည်း စိတ်ပါလာသည်။ လိင်တံကိုအပြင်ထုတ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ပွတ်သပ်နေမိသည်. မမပန်းနု၏ စဖုတ်လှလှလေးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသဖြင့် ထိုစဖုတ်လေးထဲသို့ လိုးသွင်းနေသည်ဟု တွေးကာ ဂွင်းထုနေမိသည် ။ မျက်လုံးများပင် မှိတ်ပြီး ထုနေမိသည် ။
ကောင်းလွန်းလှသဖြင့် အချိန်မည်မျှကြာသွားမှန်းမသိ ။ ဇော်ဇော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်သောအခါ…… ဟာ…… ကိုယ့်မျက်လုံးကိုပင်ကိုယ်မယုံနိုင် မမပန်းနုမှ တီဗီရှေ့တွင်မှောက်ရက်လေးကြည့်နေသည်ကို နောက်မှ ဖေဖေက အတင်းချုပ်က လိုးရန် ကြိုးစားနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့သည်။
`အင့်´ ဘယ်သူလဲ .. `ဟင်´ နောက်မှ ဖင်သားလေးကြားထဲသို့ ပူနွေးနွေးအချောင်းကြီးဝင်လာသော အထိအတွေ့ကြောင့် မမပန်းနု၏အလန့်တကြားအော်လိုက်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ မမပန်းနုလန့်လောက်ပါသည် ဖေဖေလီးကြီးမှာ နည်းတာကြီးမဟုတ် အရှည်က 7လက်မလောက်ရှိပေမည် အလုံးက ဘီယာဘူးနီးပါးပင်။ ထိပ်ဖူးကြီးက နီရဲပြောင်လက်နေသည်။ လုံချည်ပင်မပါ ထောင်မတ်နေသောလီးကြီးဖြင့် မမအခန်းထဲဝင်ကာ နောက်မှ ထောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အ……..အ. ဦးမောင်ပါလား ဘာလာလုပ်တာလဲ. ဟင် မလုပ်ပါနဲ့ နော် သမီးတောင်းပန်ပါတယ် အားးးးးးး ဖေဖေက မမပန်းနု၏ ပြေလျှော့နေသော ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပီ။
ပေါင်လေးကိုကားကာ မမပန်းနု၏စဖုတ်လေးကို လျှာဖြင့် ပျက်ခနဲ လျှက်လိုက်လေသည် အားးးးးးးးးးးးးးး မမပန်းနုကော့တက်သွားလေသည်။ အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့နော် ဘုန်းနိမ့်ကုန်ပါ့မယ် ဦးမောင်ရယ် `အ .. အ အအ´ . အိုး ..အထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူး ဦးရယ် အ ကောင်းလိုက်တာ ကျွတ်ကျွတ် .. အင့် . အရမ်းကောင်းတာပဲ၇ှင် မမပန်းနုမှ ဖေဖေ၏ လျှာအစွမ်းတွင် ပျော့ကျသွားပေပြီ။ ဖေဖေ၏ စဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို လျက်လိုက် အစေ့လေးကိုစုပ်လိုက် လုပ်ပေးနေသော အပြုအစုများတွင် နစ်မျောနေပေပြီ။ မျက်လုံးလေးကို မှိတ်ပြီး ကိုယ်မှာကော့ကော့သွားသည် အရမ်းကောင်းနေသည်ထင်၏။ ဖေဖေမှာ ဂျာရင် လက်ညှိုးလေးဖြင့် စဖုတ်လေးထဲသို့ ထိုးသွင်းကလိပေးနေသည်။
အ.. အ…အ ကောင်းလိုက်တာရှင် အရမ်းကောင်းတာပဲ ခံစားဖူးလားသမီး ဒီလိုမျိုး ၊ တစ်ခါမှ မခံဖူးပါဘူး ဦးမောင်ရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲကွာ ကဲဒါဆို ဦးလေးရဲ့ ဒါလေးကိုရောချစ်လား ဟုပြောတာ လီးကြီးကို ပန်းနု လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်လေသည်။
အမလေ. နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူးဦးမောင်ရယ် .. ဒါကြီးနဲ့သာဆိုရင်တော့ ပန်းနုသေရပါလိမ့်မယ်။ မသေနိုင်ပါဘူး ကွယ် လာ.. လာ ဦးမောင်ဖြည်းဖြည်းချင်း အသာလေး လုပ်ပေးမယ်နော် လီးထိပ်ဖူးကြီး ကို စဖုတ်ဝလေးတွင်တေ့ပြီး အပေါ်အောက် ပွတ်သပ်နေသည်။ အင့် အင့်.. အ လုပ်ရင်လုပ်ပါတော့ ဦးလေးရယ် ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့ ပန်းနု တင်းခံပါ့မယ် နာချင်နာပါစေ အထဲမှာ အရမ်းယားနေပီ ပန်းနုကိုလိုးပေးပါနော်။
ဘွတ်. ဗြတ်. အင့်.. အားးးးးးးးး
သေပါပီ မမပန်းနုမှာ နာကျင်လွန်းလှသည်ထင်၏ တအားအော်နေသည်။ တော်သေးသည် ဒီညမေမေမရှိ ရွာပြန်ကာနာရေးသွားနေသောကြောင့်ပင် အိမ်တွင် ဇော်ဇော်တို့သုံးယောက်သာရှိသောကြောင့် တော်သေးသည်။ ဖေဖေ့လီးတံကြီးမှာ မမပန်းနု စဖုတ်လေးထဲသို့ မဆန့်မပြဲဝင်နေသည်။ လီးတံကြီးဖြင့် တအားဆောင့်ထည့်မှုကြောင့် စဖုတ်လေးမှာ အောက်နားစုတ်သွားကာ အပျိုမြှေးလေးလည်းပေါက်သွားသဖြင့် သွေးများထွက်လာလေသည်။
နာတယ် နာတယ် .အမေ့ .
မလုပ်ပါနဲ့တော့နော် ဦးမောင် သမီးတောင်းပန်ပါတယ် ။
သမီးက ဦးမောင်ရဲ့ တူမအရင်းပါမသင့်တော်ပါဘူး
မလုပ်ပါနဲ့တော့နော် နာလွန်းလို့ပါ မမ၏တောင်းပန်သံမှာ ဖေဖေ၏ရမက်စိတ်ကို . မလွှမ်းမိုးနိုင် တောက်……ကောင်မ ခုနကတော့ ခံချင်လှပါပီဆိုပြီး ဘာခုမှ တော်ပါပီလဲ . နင့်စဖုတ်ကို ဒီညတစ်လုံးလိုးပစ်မယ် နင့်စဖုတ်ကိုငါလိုးချင်နေတာကြာပီ ။
ဘွတ်.. ဘွတ် ဗြွတ် .
အင့် အင့် အင့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုပုခုံးပေါ်တင်ကာ အပေါ်မှ အားရပါးရ ဖိဆောင့်နေသော ဖေဖေ့၏လိုးချက်များကား အားရစရာကောင်းလှလေသည်။ မမပန်းနုခများ စဖုတ်ထဲလီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်ပြီးသဖြင့် ရုန်းလည်းမရုန်းနိုင် တော့ အိပ်ယာခင်းလေးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ တအင့်အင့်နှင့် ညည်းညူနေရလေသည်။
ဘွတ် ဘွတ်. ဇွတ် .. ဇွတ် ဖွတ် ဖွတ် စဖုတ်လေးမှာ
အရည်များ ရွှဲနေသဖြင့် အသံမျိုးစုံထွက်နေသည်။
ဘွတ် ..အား အား .အင့် အင့် အင့် အင့် အင့်
အား .အား. နာလည်းနာတယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်
ဦးလေးရယ် ဆောင့်ဆောင့် အားရပါးရဆောင့်ထည့်လိုက်စမ်းပါ.
ပန်းနုစဖုတ်လေးက သေးပေမယ့် ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်
အား…….. အရမ်းကောင်းနေပီ အထဲမှာအရမ်းကောင်းနေပီ ..
အား…အား အားးးးးးး အအ အင့် အင့် အင့် အမေ့ ဖေဖေမှာ
မမပန်းနုစဖုတ်လေးထဲသို့ စက်သေနတ်ပစ်သလို တရစပ် လိုးပြီး ကော့သွင်းလိုက်လေသည်။
ပူနွေးသော. သုတ်ရည်များကား စဖုတ်အတွင်းသားလေးနံရံများကို တထုတ်ထုတ်နှင့် ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။ သုတ်ရည်များမှာ များလှချေသည်။ စဖုတ်အပြင်ဖက်သို့ပင် လျှံထွက်လာလေတော့သည်။ မမပန်းနုမှာ ဟင်းခနဲသက်ပြင်းချကာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး တစ်ချီပြီးသွားလေတော့သည်။………………